आज पाथिभारा माताको दर्शनसँगै कार्तिक १३ देखि १९ गते सम्मको राशिफल हेर्नुहोस् » aarthikplus
वि.सं.२०७८ कात्तिक १३ शनिवार १२:००
१. मेष राशि (चु,चे,चो,ला,लि,लु,ले,लो,आ) : मेष राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ, ईष्ट मित्र आफन्तजनबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ, टाढीएका आफन्त, मित्रहरु नजिक हुनेछन्, धन लाभ हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थीक बृद्धि हुने, धन लाभ हुने अवसर रहेको छ । नोकरी गर्नेहरुका लागी आर्थीक सुविधा प्राप्त हुने, काममा सहजता हुने छ ।
२. बृष राशि (ई,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो) : बृष राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । बोलीको प्रभावले धन लाभको अवसर मिल्ने देखिन्छ । मन प्रशन्न रहने छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभको अवसर प्राप्त होला । नोकरी गर्नेहरुको लागी पदोन्नतीको सम्भावना रहेको छ । सुखद समाचार सुन्न पाईएला ।
३. मिथुन राशि (क,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,हा) : मिथुन राशि हुनेहरुका लागी आजको आजको दिन राम्रो रहने छ, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुनेछ, मन प्रशन्न रहने छ । शुभ समाचार प्राप्त होला । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा रुची बढ्ने छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभ हुने अवसर मिल्दछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी काममा सहजता मिल्नेछ, कार्य सफल हुनेछ ।
४. कर्कट राशि (हि,हु,हे,हो,डा,डि,डु,डे,डो : कर्कट राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन त्यती राम्रो देखीदैन । खर्च हुने योग रहेको छ, लगानी गर्दा सतर्कता अपनाउनुहोला । मन परेको सामान गुम्न सक्दछ । विध्यार्थीहरुको लागी पढाईमा बाधा अवरोध आउन सक्छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक घाटा हुने योग रहेको छ । नोकरी गर्नेको लागी अपजस पाइएला ।
५. सिंह राशि (मा,मी,मु,मे,मो,टा,टि,टु,टे) : सिंह राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ । अर्थिक लाभ हुनेछ, मनमा प्रशन्नता रहनेछ । मान सम्मान प्राप्त हुन योग छ । विध्यार्थीहरुको लागी अध्यनमा रुची बढ्नेछ । ब्यापारी वर्ग हरुको लागी आर्थीक लाभ हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुको लागी मान, सम्मान र पदोन्नतीको अवसर रहने छ ।
६. कन्या राशि (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) : कन्या राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, नोकरिको अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुको लागी पढाईमा विषेश अवसर प्राप्त हुने योग रहेको छ । व्यापारि बर्गको लागी आर्थिक उन्नती, प्रगती हुने अवसर प्राप्त होला । नोकरी गर्नेहरुको लागी काममा सहजता हुने योग रहेको छ ।
७. तुला राशि (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तु,ते) : तुला राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । भाग्योदय हुनेछ, अचानक धन लाभ हुनेछ । धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ, विध्यार्थीहरुका लागी अध्ययनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थीक सुधार हुने योग रहेको देखिन्छ । नोकरी गर्नेहरुका लागी काममा सहजता प्राप्त हुनेछ ।
८. बृश्चीक राशि (तो,नाा,नी,नु,ने,नो,या,यि,यु) : बृश्चीक राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन राम्रो देखिदैन । घाउ चोट लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुने सम्भावना भएकोले सावधानी अपनाउनुहोला । गरेका कामवाट अपजस पाईएला, आफन्त संग टाढीनु पर्नाले मन खिन्न रहनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा बाधा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, व्यापारी वर्गको लागी आर्थिक अवन्नती हुने योग छ । नोकरी गर्नेहरुको लागी आफन्त संग बादविवाद हुने देखिन्छ, संयमता अपनाउनुहोला ।
९. धनु राशि (य,यो,भा,भी,भु,धा,फा,ढा,भे) : धनु राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । धन लगानी गर्दा, हार्थीक लेनदेन गर्दा साबधानी अपनाउनुहोला । महिलाहरु संगको लेनदेनमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला, वाधा अवरोध पर्ने सम्भावना रहेको छ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा रुची बढ्ने देखिन्छ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थिक अवस्था सामान्य रहनेछ । नोकरी गर्नेहरुको लागी विपरित लिंग संग वादविवाद पर्न सक्छ संयमता अपनाउनुहोला ।
१०.मकर राशि (भो,जा,जी,खि,खु,खे,खो,गा,गी) : मकर राशि हुनेहरुको लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ । स्वास्थ लाभ मिल्नेछ, मनमा उत्साह बढ्नेछ । सामाजीक काममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुको पढाईमा प्रगति होला । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभ मिल्नेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी पदोन्नती हुने, धन लाभ हुने अवसर मिल्ने छ ।
११. कुम्भ राशि (गु,गे,गो,सा,शि,शु,से,सो,दा) : कुम्भ राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । आफन्तजन र सन्तान बाट प्रशन्नता प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा सफलता मिल्नेछ । व्यापारी वर्गका लागी अचानक धन लाभ हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी भ्रमणको अवसर प्राप्त होला, शुभ समाचार सुन्न पाईएला ।
१२. मिन राशि (दि,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) : मिन राशि हुनेहरुको लागी आजको दिन राम्रो देखिदैन, आफन्तजन संग वादविवाद पर्न सक्छ । यात्रा गर्दा वा सवारी साधन चलाउँदा संंयमता अपनाउनुहोला । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा वाधा अवरोध आउन सक्छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक हानी व्यहोर्नु पर्ला । नोकरी गर्नेहरुका लागी अपजस, अपमान सहनुपर्ला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मरिच, केराउ र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाए